Huawei Watch GT2 sy GT2e dia havaozina mba hahafahanao maka sary amin'izy ireo | Androidsis
Ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny Apple Watch dia ilay ankasitrahana Huawei Watch GT2. Eny, ny mpanamboatra aziatika dia manana karazana fitafiana tsy misy ilàna fitsiriritana ny mpifaninana aminy. Ary, araka ny hitantsika, ny sainam-pireneny amin'izao fotoana izao eo amin'ny tsenan'ny smartwatch dia hahazo fanavaozana tena mahaliana.
Eny, mahazatra ny Huawei ny manavao ny fianakaviany amin'ny famantaranandro marani-tsaina matetika. Vao tsy ela akory izay, ny Huawei Watch GT2 nahazo ny metatra oxygen oxygen. Ary tonga izao ny fanavaozana vaovao, izay hahazo ny Watch GT2e ihany koa ianao ary izany dia hahafahanao mivoaka bebe kokoa amin'ny fakantsary findainao.
Ankehitriny ny Huawei Watch GT2 sy GT2e dia haka sary ho anao
Amin'izany fomba izany no kinova 1.02.18 dia tonga amin'ny Huawei Watch GT2 sy GTs2, ary io no iray amin'ireo mahaliana indrindra, indrindra satria azonao ampiasaina ny smartwatch hifehezana ny fakantsary finday lavitra. Raha ny marina, amin'ny alàlan'ny fampandehanana an'io fampiasa vaovao io amin'ny iray amin'ireo famataran'isa roa ireo, ny mpampiasa dia afaka maka sary fotsiny amin'ny fikasihana ny sary masina fakan-tsary eo amin'ny efijery. Amin'izao fotoana izao, mamela ny fakana sary fotsiny izy io, nefa tsy afaka miditra amin'ny safidy fanovana, fa ho hitantsika raha hanampy fitaovana bebe kokoa amin'ny ho avy izy ireo.
Manohy ny vaovao izay entin'ny fanavaozana farany ny Huawei Watch GT2, hilazana fa hanana fanatanjahan-tena vaovao ihany koa isika, ity famantaranandro marani-tsaina ity dia afaka mamantatra mombamomba ny fiofanana vaovao miisa 100 izay ahitana dihy kibo, yoga ary safidy maro hafa. Raha ny tokony ho izy dia naparitaka tany Angletera ity fanavaozana ity, ary ny an'ny GT2e any amin'ny Repoblika Tseky, noho izany dia afaka miandry azy io hipetraka ao amin'ny firenentsika isika mandritra ny herinandro vitsivitsy.
Vidio ny Huawei Watch GT2
Rehefa dinihina fa afaka mividy ny Huawei Watch GT2 ianao miaraka amin'ny fihenam-bidy 50 euro, dia iray amin'ireo tambim-barotra tsy tokony halainao io. Bebe kokoa, mahita ireo fanatsarana izay ho tonga miaraka amin'ny fanavaozana farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny Huawei Watch GT2 sy GT2 Lite dia navaozina ho mpiara-miombon'antoka tsara indrindra amin'ny fakantsary finday
Farafaharatsiny ao amin'ny GT2, ny efijery ny sfera dia mijanona ho banga ary tsy mampiditra azy ireo, izay tsy maintsy hijeren'izy ireo ny olana mahazo an'ity fanavaozana ity.
Ny fanavaozana farany ny Galaxy A50 dia ahafahanao manoratra ny efijery